Nostalgic 1950s-Garage-Themed AirBnB — Ukulala 10! - I-Airbnb
Nostalgic 1950s-Garage-Themed AirBnB — Ukulala 10!
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguElizabeth C
UElizabeth C yi-Superhost
Indawo entle ye-auto aficionados!
Sasilibali eliphambili kwiindaba zethu zeTV zasekuhlaleni. Sijonge! Ngelishwa le webhusayithi ayiyi kusivumela ukuba sibeke idilesi yewebhu ukuze sikuthumele khona ngokuthe ngqo ngoko ke nceda ukhangele i-WTHI TV esekelwe ngaphandle kweTerre Haute, IN kwaye ukhangele ibali usebenzisa amagama okukhangela "uMoore kwiBali" kunye ne "Betsy Wilkinson".
Ngaba ungumntu othanda imoto? Okanye mhlawumbi awukho nostalgic kweminye yale minyaka yakudala. Le ndawo iya kungena kwiinkumbulo zakho zexesha lakudala, idolophu encinci, isikhululo sokugcwalisa / igaraji. Kukhululekile ngokwaneleyo ukuba uzive ngathi usekhaya kodwa kuya konwatyiswa neemvakalelo zakho. Kwakhona, ungalibali ukuthi molo omkhulu kuClair A. Haute, idayinaso ngaphambili okanye ujonge iintengiso zemoto endala kumntu omkhumbulayo.
Abamelwane banobuhlobo kodwa kuya kubakho inani elifanelekileyo lokuhamba ngeenyawo. Xa singena isikolo kukho indawo yokumisa ibhasi ekoneni ngoko uClair, idayinaso yethu nayo inenkampani. Ngamanye amaxesha iindwendwe ze-dinosaur ziya kuzulazula kodwa akufanele kube yingxaki.
Umbuki zindwendwe ngu- Elizabeth C
Sifumaneka ngetekisi okanye ngefowuni kodwa sikwaqhele ukuba yimizuzu emihlanu xa uqhuba.
Sikunike ukufikelela kwindawo yakho nge-August Home Smart Locks ukuze ukwazi ukuza nokuhamba usebenzisa ifowuni yakho njengesitshixo sakho.
Amagama ayimfihlo eWiFi aya kunikwa emva kokuba ungenile. Sijonge phambili ekukumkeleni.
Sikunike ukufikelela kwindawo yakho nge-August Home Smart Locks ukuze ukwazi ukuza no…